ALIM-PANDIHIZANA TAO SAMBAVA : Roa lahy tratra nampiasa vola sandoka, karohin’ny Polisy
Sahiran-tsaina ny mponina, indrindra ny any ambanivohitra ao Sambava ny amin’ny fiparitahan’ny vola sandoka 20 000 Ariary izay manomboka sarotra amin’izy ireo ny manavaka ny tena izy sy ny sandoka. 8 novembre 2019
Fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray, fa mahazo vahana ny fiparitahana vola tsy tena izy ao an-toerana tato ho ato. Marihina hatrany anefa fa “helohin’ny lalàna sazy an-terivozona mandra-pahafaty ny fanaovana sy fampiasana vola sandoka”. Raha ny tatitra, ny harivan’ny alatsinainy 04 novambra 2019 teo, nandritra ny alim-pandihizina tao Maroambihy no nisy tanora roa lahy nampiasa vola sandoka ary koa mbola nahatrarana vola valo alina sy iray hetsy ariary izay sandoka roa alina ariary avokoa.
Tratran’ny tompon’ny alim-pandihizana moa ny hevi-dratsin’ireto roalahy ireto saingy mbola namindra fo ity farany ka nampisafidianiny tamin’ny hoe : hatolotra ny mpitandro filaminana na hanao raharaham-pihavanana, ka hiantoka ny lany nandritra ny alim-pandihizana tamin’ny mpikarakara. Avy hatrany moa ireto zatovo tonga dia nitsotra ny marina ka hanefa ny lanin’izy ireo ary hiroso amin’ny raharaham-pihavanana. Araka ny angom-baovao hatrany dia efa fantatra fa efa karohin’ ny Polisy izy roa lahy ireo amin’izao fotoana izao satria nandositra tsy hita popoka hatreto.